राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीको सम्पत्ति कति ? – Online Bichar
राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीको सम्पत्ति कति ?
Online Bichar 6th May, 2020, Wednesday 8:49 AM
काठमाडौँ, २४ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । अधिकारीले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार उनको माछापुच्छ्रे बैंकमा १ लाख ६३ हजार ७ सय ६२ रुपैयाँ, नबिल बैंकमा २ हजार ३ सय २ अमेरिकी डलर र नागरिक लगानी कोषमा १२ लाख २४ हजार ६ सय रुपैयाँ छ ।
गर्भनर नियुक्त भएको एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुरुप अधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा उनीसँग दुई मोटरसाइकल र एउटा टोयोटा कार रहेको उल्लेख छ । उनले ५९ लाख रुपैयाँ ऋण दिएका छन् भने ८ लाख १९ हजार ६ सय रुपैयाँ नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएका छन् ।
कूल ऋणमध्ये ५० लाख रुपैयाँ मध्य–तमोर जलविद्युत आयोजनाको सेयरका लागि हो । उनी यसका संस्थापक सेयरधनी हुन् । उनीसँग नबिल, हिमालयन, सिद्धार्थ, बैंक अफ काठमाडौँ लगायतका २७ हजार १ सय ८४ कित्ता सेयर रहेको छ जसको मूल्य ४८ लाख ३७ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ रहेको छ ।
अधिकारीसँग २७ तोला सुन र ५० तोला चाँदीका गहना छन् । त्यस्तै श्रीमती सरिता अधिकारीको नाममा सैबु गाविसमा २७ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा छ । त्यस्तै, ललितपुरको छप्पीमा ४ रोपनी १० आना, २ रोपनी १५ आना र २ रोपनी ६ आना गरी तीन कित्ता छन् । यसको मूल्इ ९० लाख रहेको छ । उनको झापा र हेटौँडामा पनि जग्गा छ । यबाहेक उनीसँग २२ सय वर्ग्फिटको जग्गा छ ।
त्यस्तै, अधिकारीको घरमा १४ लाख १० हजार बराबरको टिभी, फ्रिज लगायतका समान रहेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
दक्षिण एसियाकै सबभन्दा ठूलो जैविक मलको कारखाना प्रदेश २ मा स्थापना हुने
काठमाडौँ, १९ साउन २०७८ । दक्षिण एसियाकै सबभन्दा ठूलो जैविक मलको कारखाना प्रदेश २ मा…
यातायात व्यवस्था विभागले भदौ पहिलो सातादेखि सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल खुलाउने
काठमाडौं, १८ साउन २०७८ । यातायात व्यवस्था विभागले भदौ पहिलो सातादेखि सवारी चालक अनुमति पत्र…
असार मसान्तसम्म ६६३ स्थानीय तहमा इन्टरनेट जडान
काठमाडौँ, १८ साउन २०७८ । देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले…
सबै बीमा कम्पनीहरूबाट कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी स्थगित
काठमाडौं, १७ साउन २०७८। सरकारले तोकिएको रकम निकासी गर्न ढिलाइ गरेपछि सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले…
लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने
काठमाडौं, १२ साउन २०७८ । लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका…
इजरायलमा केयरगिभर कामका लागि एक हजार नेपाली श्रमिककोलागि आवेदन खुला
काठमाडौँ, १२ साउन २०७८ । लामो समयको तयारीपछि नेपाली श्रमिकले इजरायलमा रोजगारी पाउने भएका छन्…